भुमिकास्थान नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा अवस्थित श्री शान्ति उच्च मावि बिधालयको ५८ औ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न
रिशी भुसाल ,भुमिकास्थान|अर्घाखाँचीबुलेटिन| अर्घाखाँची जिल्लाको भुमिकास्थान नगरपालका वार्ड नम्बर -४ मा रहेको श्री शान्ति उच्च माध्यमिक बिधालयको ५८ औ वार्षिकोत्सव बिबिध कार्यक्रमका साथ् सम्पन्न भएको छ !
स्व• खिम प्रसाद भट्टराई स्मृति छात्रवृत्ति बितरण कार्यक्रम सम्पन्न
भुवन केशी ,अर्घाखाँची |अर्घाखाँचीबुलेटिन |अर्घाखाँची जिल्लाको भुमिकास्थान नगरपालिका वार्ड न ९ साबिकको ढिकुरा गाबिस वार्ड न ३ पिहाले निवासी स्व. खिम प्रसाद भट्टराईको सम्झनामा स्थापना गरिएको स्व• खिम प्रसाद भट्टराई स्मृति छात्रवृत्तिलाई उहाँको १२ औ पुण्य तिथिको अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सम्पन्न गरिएको छ ।
हरि कुँवर ,अर्घाखाँचीबुलेटिन/ शिक्षा र ज्ञान हामीले सङगत,समाज र किताब, बाट पनि पाउछन् तर त्यो ज्ञानलाइ व्यहारमा कसरी लागू गर्न सक्छौ ,भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। त्यो एउटा असल शिक्षक बाट मात्र प्राप्त हुन्छ ।
सामान्यतया २ देखि ६ उमेर समूहका बालबालिकालाई खेलौनाका माध्यमबाट खेल खेलाउँदै सिकाउने पद्धतिलाई मन्टेश्वरी शिक्षा पद्धति भनिन्छ । २० औ शताब्दिमा इटालीकी एजुकेटर तथा फिजिसियन मारिया मन्टेश्वरीले सुरुवात गरेको यो शिक्षण पद्धति अहिले संसारभर लोकप्रिय भएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर १२-२०७४-त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सबै क्याम्पसमा स्मार्ट बोर्डबाट पठनपाठन गर्ने भएको छ । त्रिविले उच्च शिक्षालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने क्रममा पठनपाठनमा स्मार्ट बोर्ड प्रयोग गर्न थालेको हो ।
काठमाडौं, मंसिर १३-भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको खाताबाट सञ्चालकहरूको खातामा ठूलो परिमाणमा रकम हस्तान्तरण भएको भेटिएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर १४-वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका एवं अंगभंग भएका तथा गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका सन्तानले अबदेखि निःशुल्क रुपमा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।